कोरोना प्रभाव : पुराना फोटोहरुमा कस्ता कमेन्ट आए ? – Narayani Dainik
विश्व ब्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोन भाइरसका कारण विश्व नै आतंकित भएको छ । गत डिसेम्बरमा चिनबाट फैलिएको यो भाइरसले २७ हजार भन्दा बढीको ज्यान लिइसकेको छ।
नेपालमा पनि कोरोना नफैलियोस भनेर चैत्र ११ गतेबाट लक डाउन गरिएको छ । यो समयमा सबै जना घर भित्र छन् । फुर्सदको समयमा साथी भाईसंग भेट गर्ने नेपालीको बानी यो समयमा घर भित्र बस्दा अतालिएका छन् । तर नेपालीहरु रमाइलो गर्नको लागि फेसबुकमा साथी भाईहरुको पुरानो फोटोमा विभिन्न रमिला कमेन्ट गरेर समय कति राखेका छन्।
फेस बुक मा भेटिएका २० कमेन्टहरु :
१) कति राम्रो photo यता बाट हेर्दा नि राम्रो, उता बाट हेर्दा नि राम्रो , उठेर हेर्दा नि राम्रो, उफ्रेर हेर्दा नि राम्रो! सुतेर हेर्दा नि राम्रो ,बसेर हेर्दा नि राम्रो , सिधा परेर हेर्दा नि राम्रो, बाङ्गो पारेर हेर्दा नि राम्रो बयान गर्ने सक्दिन म आहा कति राम्रो!
२) अत्यन्तै प्रेरणादायी फोटो ! म प्रेरित भएँ अनि मेरा साथीहरूलाई देखाएँ, उनिहरु पनि प्रेरित भए र आफ्ना परिवारलाई देखाए । उनिहरु पनि प्रेरित भए र आफ्ना छिमेकीहरुलाई देखाए । यसको प्रभाव यति थियो कि छिमेकीहरू पनि प्रेरित भए । त्यसपछि प्रोजेक्टर भाडामा लिएर सारा गाउलेलाई देखाए र गाउँलेहरु पनि प्रेरित भए पश्चात अहिले देश नै प्रेरित गर्ने अभियान चलेको छ । यस्तो उच्च प्रेरणादायी फोटो हालेर सबैलाई प्रेरित गर्नुभएकोमा मुरीमुरी धन्यवाद ।
३) टस जितेर ब्याटिङ रोजेको कोरोनाले आफ्नो पहिलो टेस्ट खेल चीन बिरुद्द खेलेको थियो।पहिलो खेलमा कोरोनाले सुरुवातमा नै आक्रमण ब्याटिङ गरेपछि चिनका बलर र फिल्डर दर्शक मात्र बनेका थिए।चीन विभिन्न राष्ट्र हरुबाट आलोचित भए पनि उसले आफ्नो खेल मा धैर्यता दिदै खेल मा काबु गर्न सफल भयो ।तर 3287 रन कोरोना ले चीन का बिरुद्द बनाउन सफल भैसकेको थियो त्यस्तै दोस्रो खेलमा इटाली सन्ङ पनि कोरोनाले खेल को पहिलो बल बाटनै बाउन्ड्री लगाउन थालेपछी एकै दिन मा 500 भन्दा धेरै रन बनाएको थियोे ।कोरोनालाई हल्का लिएको र यसका बिरुद्द प्राक्टिक्स नगरेको हुदा इटाली ले नराम्रो हार को स्वाद चाखिरहेको छ।हाम्रा सम्बादाता का अनुसार अप्रत्याशिलो हार बेहोरेपछि इटालीका कप्तानका आँसु देख्दा पूरा बिस्व भरी बाट उहालाइ हिम्मत नहार्नु र धैर्यता सन्ङ काम गर्न हौसला दिएको थियो।कोरोनाले इटालीका बिरुद्ध सार्बार्धिक रन बन्नएको छ।कोरोनाले ताजा अबस्थामा 7503 रन बनाएको छ। अहिलेसम्म कोरोनाले लगभग 198 देश सङ्ग खेल खेलिसकेको छ जसमा नेपाल पनि पर्दछ तर नेपालमा दक्ष कोचको कमि भएकोले अलि प्रक्टिक्स गर्नुपर्ने (ICCB-WHO)INternational corona council board-world health organization )ले बतायो।तर सबभन्दा राम्रो प्रद्शन नेपाल को रहेको पुष्टि गरेको छ।हिजो को खेलमा नेपाल का एकजना खेलाडीले नियम बिपरित खेल खेलेको भन्दै कोचले लाठीचार्ज गरेको भिडियो समाजिक संजाल मा भाइरल भएको छ।हामी निरन्तर news मा छौ। #be safe #corona
४) १० बर्से जनयुद्ध, इबोला भाइरस तथा बिभिन्न कालघेरा बाट उम्केर ऐले कोरोना बाट बच्न संघर्ष गरिरहेको मध्य एउटा मानिस हुनुहुन्छ उहा ।
५) २०७२ बैसाख १२ गते को भुकम्प पछि फेरि आज को यो तस्वीर ले नेपाल हल्लाएको छ ।।निकै उत्कृष्ट तस्बिर हेर्ने मौका दिनुभयो।। म अभारी छु।। जय होस ।।
६) घाइते बनायो यो तस्बिरले अस्पताल जाम भनेको लक डाउन रैछ। यसको दोष यो फोटो बालाले लिनी कि सरकारले?
७) यो फोटो देखेर जो कोहिलाई पनि फस्ट साइट लभ पर्न सक्छ त्यसैले होशियार हुनुहोला । यस फोटोलाइ संग्राहलयमा लगेर राख्ने हो भने पनि लाखौले हेर्न आउनेछन । ।।।करोडौंमा लिलाम पनि हुन सक्छ ।जो पाई लाई यो फोटो नदेखाउनु होला फेरि हृदयघात को शिकार होलान ल ।
८)सुचना सुचना सुचना हाम्रो कार्यालयमा चिया पकाउने कर्मचारीको अावश्यक परेको हुदा हजुर लाई हामीले select गरेका छौ , तलबः 800 + खाजा ‍‌(चिया 1 कप)
९)आम नेपालीले साबुन पानीले हात धुन ध्यान दिने कि हजुरको यो लोब लाग्दो तस्बिरमा ध्यान दिने अब?
१०)Aeroplane धेरै देखियो तर तपाइको फोटोको विशालता त्यो aeroplane मा पनि देखिन निश्चल बगेको पानि पनि देखे तर तपाइको फोटो जति सुन्दर त्यो पानी पनि थिएन गुच्चा त के होर त्यो भन्दा गोलो तपाइको ऑखा light को speed त के होर त्यो भन्दा छिटो चल्ने तपाइको दिमाग सेतो हिउ पनि देखे तर मा कसम तपाइको फोटो भन्दा सेतो र गोरो त त्यो हिउ पनि थिएन हजुरको फोटो एकदम राम्रो छ किप इट अप येसरी नै फोटो फेसबुकमा हाल्नुस् एकदिन ठूलो मान्छे बन्नु हुन्छ अनि तपाइको फोटो खिच्ने पनि कुनै DSLR केमरा खेलाउने व्यक्ति भन्दा कम छैन होला Fair&Lovely ले पनि धोका खान्छ हजुरको फोटो देखेर जय हजुरको फोटोफोटो भनेको त एस्तो हुनपर्छ नि हिरा भन्दा कम छैन आज्कल जस्तो पायो तेस्तै फोटो हाल्छन मान्छेहरु तर यो फोटो३०°,४५° चाही ९०° हेरेपनि सुन्दर देखिन्छ । यो फोटो देखेर जो कोहिलाई पनि फस्ट साइट लभ पर्न सक्छ त्यसैले होशियार हुनुहोला । यस फोटोलाइ सङ्रहमा लगेर राख्ने हो भने पनि लाखौले हेर्न आउनेछन । ।।।करोडौंमा लिलाम पनि हुन सक्छ । मैले एति राम्रो फोटो देखेकै थिएन ।कस्सम कसम से हो के । अझ त्यो चम्किलो मुहारको तारिफ मैले गर्न छुटाए भनेर नरिसाउनु जुन भन्दा चम्किलो धपक्कै बलेको मोहडा आहा कति राम्रो के । जुनले पनि हजुरको यो चम्किलो मुहार देखेर डाहा गर्छ त्यो केश त्यो आखा त्यो ओठ त्यो हसिलो मुहार आहा साच्चै कति मिलेका र सुहाएका हुन सबै कुरा । तपाइलाइ त भगवानले दिनरात मेहेनत गरेर यस्तो राम्रो बनाएर पठाएका हुदा हुन है । भयो छोडनुस तपाईको सुन्दरताको बयान गर्न त५०० पानाको किताब नै लेख्नुपर्ने हुन्छ त्यसैले यहा बयान गरेर साध्य छैन । अझै गर्थे बयान तर ऐले अबेर भयेछ ल कीप इट अपl जो पाई लाई यो फोटो नदेखाउनु होला फेरि हृदयघात को शिकार होलान ल । जादाजादै एउटा सल्लाह दिन्छु कि हजुरले यो सुन्दर चम्किलो अनुहार तपाईले यो तस्बिर फेसबुकमा हाल्नु भयो तब देखी पृथ्वीलोकमा आन्धाकार हटेको छ । लाग्छ कि सुर्य देवले स्वयम सुर्यको बिकल्प बनएर पठाउनु भएको तपाईको यो ज्वलन्त तस्बिर । काठमाडौं को लोड्शेडिङ त के बिस्व कै आन्धकर हटाउन सक्ने क्षमता देख्छन नासाका बैज्ञानीकहरु तपाइको यो तस्बिरमा । बिज्ञानमा मात्र हैन धर्म क्षेत्रमा पनि प्रभाब पार्न पुगेको छ तपाईको यो तस्बिरले । माहत्मा हरु भन्छन यस तस्बिरको प्रबेश प्राचिन कालमा हुन पर्थिओ । महभारत र रामायण जस्ता विश्वकै आन्धकर हटाउन सक्ने क्षमता देख्छन नासाका बैज्ञानीकहरु तपाइको यो तस्बिरमा । बिज्ञानमा मात्र हैन धर्म क्षेत्रमा पनि प्रभाब पार्न पुगेको छ तपाईको यो तस्बिरले । महात्माहरु भन्छन यस तस्बिरको प्रबेश प्राचिन कालमा हुन पर्थ्यो । महभारत र रामायण जस्ता ठुला ठुला युद्ध रोक्ने क्षमता छ रे तपाइको यो धपक्क बली रहेको अनुहार मा । तपाईको झलझल बलिरहेको यो तस्बिर आशाको किरण बनेर आएको छ यस पृथ्वि लोकमा बसोबास गर्ने मनुष्य जातमा । लाग्छ कि यो खुला आकाशको पवनमा तपाईको तस्बिर बगिरहेको छ।
११)अनि प्रहरीले एउटालाइ कुटेको लट्ठीले अर्कोलाइ कुट्दा लट्ठिमा स्यानिटाइजर दल्छन् कि नाइँ? तनाव पनि कति हो मलाइ?
१२)आहा , कति राम्रो फोटो । मिलेको जिउडाल , आकाश जस्तो निधार, महादेवको जस्तो आँखा , झरना जस्तो कपाल , चन्र्दमा जस्तो मुहार। यस्तो राम्रो मान्छे को यस्तो राम्रो फोटोको बयान स्वयं ईन्द्र को बाबु चन्द्रले त गर्न सक्दैनन् म त एक मानव न परेॅ। तैपनी एक लाइक सम्म गरेको छु। यस अनुहार फेसबुकको भित्तोमा एक भन्दा बढी लाईक गर्न पाईन्न रहेछ नत्र सारा जिवन यहि फोटो मा लाईक गरेर विताउने थिँए।कस्सम ढॉटेको होइन ! सानैदेखि धेरै फोटो देखियो तर तपाइको जस्तो फोटो अहिले सम्म देखेको थिइन! Aeroplane धेरै देखियो तर तपाइको फोटोको विशालता त्यो aeroplane मा पनि देखिन निश्चल बगेको पानि पनि देखे तर तपाइको फोटो जति सुन्दर त्यो पानी पनि थिएन गुच्चा त के होर त्यो भन्दा गोलो तपाइको ऑखा light को speed त के होर त्यो भन्दा छिटो चल्ने तपाइको दिमाग सेतो हिउ पनि देखे तर मा कसम तपाइको फोटो भन्दा सेतो र गोरो त त्यो हिउ पनि थिएन❄ हजुरको फोटो एकदम राम्रो छ किप इट अप येसरी नै फोटो फेसबुकमा हाल्नुस् एकदिन ठूलो मान्छे बन्नु हुन्छ अनि तपाइको फोटो खिच्ने पनि कुनै DSLR केमरा खेलाउने व्यक्ति भन्दा कम छैन होला Fair&Lovely ले पनि धोका खान्छ हजुरको फोटो देखेर जय हजुरको फोटोफोटो भनेको त एस्तो हुनपर्छ नि हिरा भन्दा कम छैन आज्कल जस्तो पायो तेस्तै फोटो हाल्छन मान्छेहरु तर यो फोटो३०°,४५° चाही ९०° हेरेपनि सुन्दर देखिन्छ । यो फोटो देखेर जो कोहिलाई पनि फस्ट साइट लभ पर्न सक्छ त्यसैले होशियार हुनुहोला । यस फोटोलाइ सङ्रहमा लगेर राख्ने हो भने पनि लाखौले हेर्न आउनेछन । ।।।करोडौंमा लिलाम पनि हुन सक्छ । मैले एति राम्रो फोटो देखेकै थिएन ।कस्सम कसम से हो के । अझ त्यो चम्किलो मुहारको तारिफ मैले गर्न छुटाए भनेर नरिसाउनु जुन भन्दा चम्किलो धपक्कै बलेको मोहडा आहा कति राम्रो के । जुनले पनि हजुरको यो चम्किलो मुहार देखेर डाहा गर्छ त्यो केश त्यो आखा त्यो ओठ त्यो हसिलो मुहार आहा साच्चै कति मिलेका र सुहाएका हुन सबै कुरा । तपाइलाइ त भगवानले दिनरात मेहेनत गरेर यस्तो राम्रो बनाएर पठाएका हुदा हुन है । भयो छोडनुस तपाईको सुन्दरताको बयान गर्न त५०० पानाको किताब नै लेख्नुपर्ने हुन्छ त्यसैले यहा बयान गरेर साध्य छैन । अझै गर्थे बयान तर ऐले अबेर भयेछ ल कीप इट अपl जो पाई लाई यो फोटो नदेखाउनु होला फेरि हृदयघात को शिकार होलान ल । जादाजादै एउटा सल्लाह दिन्छु कि हजुर।
१३) भन्दा गफ हाने जस्तो तपाईं को यो जादुमय तर्बिर हेरे पछि मलाइ कोरोना सङ लड्ने हौसला मिलेको छ ।
यो तस्बिर चाइना इटली अमेरिका ले पाए अर्बैमा किनेर लैजान्छन होला । त्यो तस्बिर बिना नेपाल अधुरो रहान्छ त्यसैले नबेच्नु होला । धन्यवाद ।
१४)के लकडाउनले गर्दा beauty parlour बन्द भयो? के मेकअप गर्न पाउनु भएन??
चिन्ता नलिनु होस हामीसङ्ग छ एउटा उपाय मास्क लगाउनुहोस तपाईको अनुहार कसैले देख्न पाउने छैनन्
१५) काठमाडौं को लोड्शेडिङ त के बिस्व कै आन्धकर हटाउन सक्ने क्षमता देख्छन नासाका बैज्ञानीकहरु तपाइको यो तस्बिरमा । बिज्ञानमा मात्र हैन धर्म क्षेत्रमा पनि प्रभाब पार्न पुगेको छ तपाईको यो तस्बिरले । माहत्मा हरु भन्छन यस तस्बिरको प्रबेश प्राचिन कालमा हुन पर्थिओ । महभारत र रामायण जस्ता ठुला ठुला युद्व रोक्ने क्षमता छ रे तपाइको यो धपक्क बली रहेको अनुहार मा । तपाईको झ्ल्झ्ल बलिरहेको यो तस्बिर आशाको किरण बनेर आएको छ यस पृथ्वि लोकमा बसोबास गर्ने मनुष्य जातमा । लाग्छ कि यो खुला आकाशको पवनमा तपाईको तस्बिर बहीरहक छ ।
१६)कोरोनाभाइरसबाट बच्न बेलाबेलामा साबुनपानीले मिचिमिची हात धोऔं । भीडभाडमा नजाऔं । खोक्दा वा हाच्छ्युँ गर्दा नाक र मुख कुहिनाले ढाकौं । हात मिलाउनु वा अंकमाल गर्नुको सट्टा नमस्कार गरौं । ज्वरो आएमा वा खोकी लागेमा सतर्कता अपनाऔं।
– स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
१७)के तपाई आफ्नो फोटो तथा स्टाटसमा like र comment नआएर चिन्तित हुनुन्छ? के तपाईं comment को reply नआएर तनावग्रस्त हुनुन्छ? यदि यसो हो भने अब यो सारा समस्या बाट छुटकारा पाउनु हुने छ। किन कि तपाई को हरेक फोटो र स्टाटसमा comment गर्न म आइपुगे ।।
१८) मैले प्रत्येक comment पछि हात धोएको छु! अनि तपाइँले नि??
१९) यो रेडियो नेपाल हो,अब सुन्नुस पूरा समाचार, हजुर ले भर्खरै पोस्ट गर्नु भएको फोटो ले पूरा दुनियाँमा तहल्का मच्चाई राखेको छ करोडौं मान्छे लाइन लागेका छन हजुर को तस्वीर हेर्न आगामी दिन मा यति धेरै सुन्द अनि राम्रो सुन्दर फोटो फेसबुक मा नराख्न केपि ओलि ज्यु ले अपील गर्नु भाएको छ र लाखौं को संख्या मा मानिस बेहोस भएको पनि हाम्रा बरिस्ठ डाक्टरले बताएका छन् कृपया पुर्याउनु होला
२०)जब देखी तपाईं ले यो तस्बिर अनुहार पुस्तिका मा हाल्नु भयो तब देखी पृथ्वीलोक्मा आन्धाकार हेटको छ । लाग्छ कि सुर्य देव ले स्व्यम सुर्य को बिकल्प बनएर पठाउनु भएको तपाईं को यो ज्व्लन्त तस्बिर । काठमाडौं को लोड्शेडिङ त के बिस्व कै आन्धकर हटाउन सक्ने छ्यमता देख्छन नासाका बैज्ञानीक हरु तपाईं को यो तस्बिर मा । बिज्ञान मा मात्त्र हैन धर्म छेत्र मा पनि प्रभाब पार्न पुगेको छ तपाईं को यो तस्बिर ले । माहत्मा हरु भन्छन एस तस्बिर को प्रबेश प्राचिन काल मा हुन पर्थिओ । महभारत र रमायान जस्ता ठुला ठुला युध रोक्ने छ्यमता छ रे तपाईं को यो धपक्क बली रहेको अनुहार मा । तपाईं को झ्ल्झ्ल बलिरहेको यो तस्बिर आशा को किरन बनेर अएको छ एस पृथिवी लोक मा बसोबास गर्ने मनुस्य जात मा । लाग्छ कि यो खुला आकाश को पवन मा तपाईं को तस्बिर बही रहेको छ । तपाईं को यही तस्बिर देखेर चरा हरु चिर्बिराउन थालिसके , कबी हरु कबिता रच्न थालिसके , गोपिनी हरु कृष्णजिइ लाई त्यगेर तपाईं को याद मा तड्पिन थालिसके । पुरै ब्रमान्ड खल्बलाएको तपाईं को एस तस्बिर लाई चुनौती दिन सक्ने अर्को तस्बिर समय को अन्त्य हुन अगाडी आउला भनेर मानब जाती कै लागि ठुलो प्रस्न भएर अढिएको छ ।